Dingana fitiliana siramamy tsy misy rà Rockley | Vaovao IPhone
Raha nilaza toy izao ianao dia mety hafahafa izany saingy tena akaiky ny zavatra mety ho dingana voalohany mankany amin'ny famoahana Apple Watch afaka mandrefy glucose amin'ny rà tsy mila puncture isika. Ny mpamatsy ny orinasa Cupertin, na Rockley Photonics, niditra tamim-pomba ofisialy ny dingana fitsapana sensor iray afaka manome an'ity angona ity amin'ny fomba tsy manafika.
Amin'ny fitsipika hatramin'ny Rockley hoy izy ireo izy ireo dia hanampy an'ity sensor ity mivantana avy amin'ny fehin-tànana Apple iray hafa fa mety amin'ny maodely Apple Watch amin'ny ho avy. Rockley dia niasa tamina karazana sensor isan-karazany nandritra ny fotoana ela, ao anatin'izany ireo tsotra indrindra toy ny fandrefesana ny tahan'ny fo, ny saturation oxygen, ny tosidra, ny hydration ary ny hafanan'ny vatana.
Fa ny sensor izay mampiakatra ny fahalianana indrindra dia midika hoe ary ny mpampiasa dia tsy isalasalana fa ny fandrosoana be indrindra amin'ny teknolojia, ary izy io dia mamela ny fandrefesana ny siramamy amin'ny rà, ny monoxide karbonika, ny lactate na mamela ny fandrefesana ny haavon'ny alikaola ra mihitsy aza. Ankehitriny io sensor io no hizahan-toetra azy amin'ny kinova farany.
Ity fanombohana elektronika UK ity dia miasa amin'ny kinova mora kokoa momba ny sensor toa ireo ao amin'ny Apple Watch izay afaka mandrefy an'ity angona rehetra ity. Ny sensor probel izay iarahan'izy ireo miasa amin'ny dingana farany dia fomba vaovao tsy manafika izay afaka mahazo angona avy ambanin'ny hoditra hamakafaka ny ra.
Amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny dingana fitsapana izy ireo ary izany no antony tsy tokony hitandrina isika amin'ny mety fampiharana ireo sensor ireo ao amin'ny Apple Watch, tsy maintsy miandry valiny avy amin'ny orinasa isika ary avy eo afaka mampihatra azy ireo amin'ny fitaovana toy ny fiambenana Apple. Raha toa ka tonga tokoa ity farany dia mety ho revolisiona amin'ny tsy fahitana ny vidin'ny Apple Watch miaraka amin'ity sensor efa natsangana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Dingana fitsapana Sugar Sugar Noninvasive Blood